Inkakha yeBafana ikhwelezela uMkhalele kwelesizwe
UHELMAN Mkhalele elinye lamaphini omqeqeshi weBafana Bafana uHugo Broos (ophakathi), behleli nomunye umsizi uChedomir Janevski ngesikhathi behambele eminye yemidlalo yePremier Soccer League ukuyobheka abadlali Isithombe: BACKPAGEPIX
Mthokozisi Mncuseni | October 12, 2021
INKAKHA yeBafana Bafana, uMark Williams, ivukwa yisikhwele uma kunconywa umqeqeshi weBafana Bafana, uHugo Broos, ngafike wakwenzela iqembu lesizwe elikhombisa izimpawu zokuvuka.
Okukhalisa uWilliams ngukuthi uma kunconywa uBroos, alibe lisavela nakancane igama lephini lakhe, uHelman “Ncane” Mkhalele, acabanga ukuthi nguyena injini yomkhumbi weqembu lesizwe.
IBafana inezimpawu zokubuyisa uthando kubantu baseNingizimu Afrika kodwa okuqaphelekayo yindlela afike wenza ngayo lo mqeqeshi waseBelgium, othathe indawo kaMolefi Ntseki.
Ngaphandle kokunganqeni ukubhadlaza kwabezindaba uma kukhona angeneme ngakho, uBroos usezakhele olukhulu ugazi ngokuqinisa ikhanda ngabafana abancane iningi labo alibone lidlala iCosafa Cup ebiseGqeberha ngoJulayi.
Yize uWilliams engomunye wabancoma uBroos, akumhleli kahle ukuthi akube kusashiwo lutho ngozakwabo kwiBafana yango-1996, uMkhalele oyiphini.
NgokukaWilliams, konke lokhu okwenziwa wuBroos bekungeke kusheshe kuvune izithelo ngale ndlela ngaphandle kukaMkhalele.
“Angifuni ukuvela njengomuntu onomona kumbe ongafuni ukubona into enhle eyenziwa uBroos kwiBafana kodwa kusemqoka ukukubalula ukuthi isandla sikaMkhalele sikhulu kuleli qembu lesizwe ngakho-ke, akufanele igama lakhe lingabe lisavezwa nakancane kokuhle okwenzekayo,” usho kanje uWilliams nosewumhlaziyi webhola kuthelevishini.
“Iningi labadlali bakaBroos baqokwe wuMkhalele ukuyobasebenzisa kwiCosafa ngaphambi kokungenwa yiCovid-19.
“Nakuba uMkhalele ubengekho eduze neqembu kodwa ubexhumana noMorena (Ramoreboli) okwenza ngikhululeke ngithi yiqembu lakhe uMkhalele leli elidle iCosafa.
“Yebo uBroos usekhombisile ukuthi kukhona okuhle asiphathele khona futhi nemisebenzi yakhe ngaphambi kokuthatha kwiBafana siyayazi.
“Engithanda ukuthi singakukhohlwa ngaso sonke isikhathi, yigalelo likaMkhalele ngoba konke lokhu uBroos akwenzayo ukufice sekukhona wase efaka umqondo wakhe,” kusho uWilliams.
UMkhalele odlale kwiJomo Cosmos nakwi-Orlando Pirates unesipiliyoni sokudlala nase-Europe njengoba eke wagijima eTurkey.
Konke lokhu uma uzokuqhathanisa nokuthi ungumuntu othobekile futhi ozihluphawo ngokukhululisa ulwazi lwakhe kwezokuqeqesha, kuyacaca ukuthi uBroos wathola iphini elikahle.
Ngemuva komdlalo weBafana ne-Ethiopia, uPhumudzho Manenzhe obehlaziya kwaSABC uthe, okwenza umsebenzi kaBroos ube lula yindlela uMkhalele azinika ngayo isikhathi nabadlali njengoba enzile ngaphambi kokuthi kufakwe u-Evidence Makgopa ofike washaya igoli lesithathu.
IBafana iqhwakele kuGroup G ngamaphuzu ayisikhombisa kweyokuhlungela iNdebe yoMhlaba. Namuhla izodlala ne-Ethiopia eFNB Stadium ngo-6 ntambama. Inqobe umdlalo odlule naleli qembu ngo 3-1 ekuhambeni.